बझाङको चैनपुर नजिकै जीप दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु – दैनिक नेपाल न्युज
बझाङको चैनपुर नजिकै जीप दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु
बझाङ, २ असारः सदरमुकाम चैनपुर नजिकै रहेको डुङ्रीबाट मष्टागाँउपालिका जाँदै गरेको से. १ ज १०७२ नम्बरको जीप मष्टाको वडा नं १ डौठी भन्ने ठाँउमा दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । वडा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव निरीक्षक माहानन्द जोशीका अनुसार जीप अप्ठेरो ठाँउमा खसेको र मान्छे समेत जान नसक्ने भएका कारण उद्वार गर्न निकै समस्या भएको छ । दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन । तीन जनाको उद्वार गरि सके पनि जीपमा कति व्यक्ति सवार थिए भन्ने केही खुल्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म चार जनाको शव फेला परेको र जीप भिरमा अड्किएको अवस्थामा रहेको बताइएको छ । घटनाको थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घटनास्थलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनार, प्रहरी नायब उपरिक्षक सुर्यबहादुर केसिसहितको टोली गएको छ । उद्वारका लागि नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी र स्थानीय बासिन्दा भिरमा बाटो खनिरहेका छन् । –रासस
त्यो रातो स्कुटीवाली !
“पूँजीगत खर्च करीब ८० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य” – योजनामन्त्री आङ्बो